Dhageyso Tarjumada Kalimadda Cusub Ee Xakiimul Ummah. – Calamada.com
Dhageyso Tarjumada Kalimadda Cusub Ee Xakiimul Ummah.
calamada September 14, 2018 1 min read
Mu’asasada As-saxaab garabka warbaahineed ee Mujaahidiinta Al-qaacidah ayaa baahisay kalimad cusub oo qayim ah taasi oo uu jeediyay Sheekh Dr Ayman Al-dawaahiri Amiirka Guud Ee Mujaahidiinta Al-qaacidah.
Kalimadda Cusub oo cinwaankeedu yahay “Sideen U Wajaheyna Americanka” ayuu sheekhu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sida ay dowladda mareykanka Mas’uul uga tahay Barakicinta iyo dilka lagu hayo dadka musliminta ah ee ku kala dhaqan daafaha caalamka.
Kalimada oo la dhageysan karo illaa 30 daqiiqo ayuu inteeda badan kula hadlay mujaahidiinta caalamka, isagoona kula dardaarmay in ay u istaagaan baraarujinta bulshada muslimita ah ee caalamka iyo in ay u istaagaan beegsashada masaalixda mareykanka ee daafaha dunida iyagoo aan illaabeyn in dagaalka nagala dhexeeyaa uu yahay mid caqiido diimeed salka ku haya.
Halkan Ka Dhageyso Kalimadda Oo Af-somali Lagu Tarjumay.
Halkan Ka Dhageyso Kalimadda Xakiimul Ummah Oo Dhameystiran.
Previous: Jowhar: Sarkaal Ka Tirsan Dowlada Oo Shil Gaari Ku Dhintay.
Next: Qarax Gaari Gaashaaman Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Gobalka Sh/dhexe.